को हुन समीरमानसिंह बस्नेत ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
को हुन समीरमानसिंह बस्नेत ?
गौचन हत्याका अनुत्तरित प्रश्न
राजधानीमै उच्च पदस्थ व्यक्तिको हत्या भएपछि नेपाल प्रहरी निकै दबाबमा थियो । २३ असोजमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्या भएको २८ दिने अनुसन्धानपछि प्रहरीले गौचनको हत्यामा संलग्न समूहको नाम सार्वजनिक गर्यो असोज २३ गते बानेश्वरमा कार्यालय जानेक्रममा गाडिभित्रै गोली हानेर गौचनको हत्या भएको थियो । हत्या लगत्तै प्रहरीले काठमाडौंमा गुण्डाका रुपमा कहलिएका समिरमान बस्नेत र दुर्गा तिवारीको हत्यामा संलग्न देखिएपछि भारतमा गएर लुकेर बसेका मनोज पुन समूहको संलग्नता रहेको प्रहरीको दावी छ ।
हत्यामा संलग्न रहेका सुटर दावी गरिएका राजिव स्याङताङ सहित पाँच जनालाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले योजनामा १३ जना संलग्न रहेको सार्वजनिक ग¥यो । १३ जनामध्ये ८ जना फरार छन् । फरार रहेकाहरुमध्ये बस्नेत र पुन हत्या योजनाकार रहेको र ठेक्कापट्टामा संलग्न ठेकेदारलाई तर्साएर पैसा उठाउन गौचनको हत्या गरेको निष्कर्ष समेत सुनायो । तर कति पैसा माग गरिएको थियो को को सँग पैसा माग गरिएको र कहा दिनु भनिएको थियो भन्ने विषयमा प्रहरी मौन देखिएको छ ।
कहाँबाट पक्राउ परे ?
फोटोः नेपाल प्रहरी
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्न गोली प्रहार गर्ने सुटरसहित पाँच जना सहयोगी पक्राउ परेका भनिएपनि उनीहरु कसरी पक्राउ भन्ने विषयमा प्रहरी मौन बसेको छ । प्रहरीले लामो समयपछि अनुसन्धानका क्रममा एक भारतीय नागरिकसहित पाँच जना पक्राउ गरी काठमाडौमा सार्वजनिक गरर्यो । तर उनीहरु कहाबाट कहिले भन्ने केही खुलाएन ।
पक्राउ पर्नेहरुमा नुवाकोटको पंचकन्या गाउँपालिका–५ बस्ने २१ वर्षीय राजीव स्याङताङ, पर्साको कालीकामाई गाउँपालिका–१ बस्ने ३५ वर्षीय शिवजी महतो, बेतिया जिल्ला ग्राम पंचायत चौबेटोला–७ विहार भारतका २४ वर्षीय मुकेशकुमार पाण्डे, पर्साको ठोरी गाउँपालिका–५ बस्ने १८ वर्षीय सन्तोष गुरूङ र काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–४ बस्ने २२ वर्षीय प्रकाश बुढाथोकी रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार गौचन हत्या काण्डका मूख्य योजनाकार काठमाडौ वाफलका समीरमानसिंह बस्नेत हुन , भने उनलाई रुपन्देहीका मनोज पुनले सहयोग गरेको थिए उनीहरुसहित आठ जना हाल फरार रहेका छन् ।
बस्नेतसँगै मनोज पुन, लोप्साङ लामा, बोका भन्ने गंगा लिङ्देन लिम्बु, श्यामबहादुर गुम्बे, काले दाइ भन्ने अम्बर बहादुर राना, रोशन बुढाथोकी र अजय थापा फरार छन । प्रहरीका अनुसार गुम्बेलाई घटनामा पक्राउ परेकाले बोका भनेर मात्रै चिन्दै आएका थिए । खम्बे र राना नेपाली सेनाका भगौडा सिंपाही हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानीरिक्षक (एआइजी) जयबहादुर चन्दले पैसाकै कारण हत्या भएको बताए । अनुसन्धान हत्या अनुसन्धानका लागि बनेको प्रहरी कार्यदलले एक महिना पछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् गौचन हत्या फिरौतीकै लागि भएको जानकारी दिएको छ ।
अनुसन्धान कार्यदलका संयोजक प्रहरी नायव महानीरिक्षक (डीआइजी) गणेश केसीले बस्नेत र उनको समूहले गौचनलाई पटकपटक फोन गरेर ठूलै परिमाणमा पैसा मागेको जानकारी परिवारका सदस्य र अन्यबाट बुझ्दा प्रमाािणत भएको दावी गरे । ‘मुख्य अभियुक्त फरार रहेकाले कति मागिएको भन्ने खुल्न सकेको छैन बस्नेतलाई पक्राउ गरेपछि यसको सबै विवरण खुल्नेछ’, डिआइजी केसीले भने ‘अभियुक्तहरु भारतमा लुकेर बसेको जानकारी आएको छ हामीले भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छौ फरार अभियुक्तहरु छिटै पक्राउ पर्नेछन ।’
२३ असोजमा निर्माण व्यवशायी गौचनको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उनको हत्यामा दुइ वटा पेस्तोल प्रयोग भएको प्रहरीले दावी गरेको छ । ‘गौचनमाथि प्रहार भएको गोली दुई वटा पेस्तोलबाट प्रहार भएको प्रहरीको फोरेस्सिक ल्याबबाट पुष्टी भएको छ’, डिआइजी केसीले भने । प्रहरीका अनुसार हतियारको व्यवस्थापन गर्ने शिवजी महतोले भारतको बेतियाबाट नेपाली ५५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी ६५ हजारमा श्याम गुम्बे गुरुङलाई बिक्री गरेका थिए । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार उनको हत्या हुनुभन्दा एक महिना अगाडि अर्थात भदौं २३ गतेबाटै गौचनको हत्याको योजना बनेको थियो । त्यही योजना अनुसार भारतबाट चोरीको मोटरसाइकल किनेर काठमाडौं ल्याएर नेपाली नम्बर राखियो,भारतमै पेस्तोल किनेर नेपाल ल्याएर राखियो ।
उता भारतमा रहेका बस्नेत र पुनले सबै ठेकेदारहरुसँग पैसा उठाएर पठा भनेर थर्काइरहे । गौचनले मानेनन् र योजना अनुसार असोज २३ मा अनामनगरमा रहेको कार्यालय जान घरबाट निस्किएको मौका पारेर गोली हानेर हत्या गरिएको प्रहरी दावी छ । गौचन हत्याको अनुसन्धानका लागि बनेको कार्यदलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र विशेष ब्यूरोका प्रहरी अधिकृतहरु संलग्न थिए । उनीहरुले विभिन्न व्यक्तिको कल डिटेलसँगै सीसीटीभी, फोरेन्सिक ल्याबको समेत सहयोग लिइएको थियो । विभिन्न अपराधिक घटनामा संलग्न भएको अभियोग लागेका बस्नेत देशबाहिर लुक्दै आएका छन् । देशबाहिरबाटै उनले हत्याको नेतृत्व गरेको प्रहरीले दावी गरेको छ । रुपन्देहीका मनोज पुन पनि एमालेसम्बद्ध युवा संघ रुपन्देहीका दुर्गा तिवारीको हत्यापछि फरार रहेका छन् ।
को हुन समीरमान बस्नेत ?
बाफलका स्थायी वासिन्दा रहेका समीरमानसिंह बस्नेत शुरुमा टोले गुण्डा हुन । प्रहरी इन्काउटरमा परेका दिनेश अधिकारी ‘चरी’ तथा कुमार घैंटे कुनै समयमा एउटै समूहमा थिए । चरी र घैटेवीच आपसी विवाद भएपछि चरीले आफ्नो छुट्टै समूह बनाए भने घैटेले बस्नेतलाई साथमा लिएर अर्को समूह बनाए । चरीलाइ काउन्टर दिनकै लागि घैंटेले बस्नेतसँग मितेरी साइनो गाँसे । त्यसपछि बस्नेत घैंटे समूहको हर्ताकर्ता भए । ३ भदौ २०७२ मा सामाखुसीको कपुरधारामा कुमार घैंटेको इनकाउन्टर भयो । त्यसपछि घैंटेको समूह तहस–नहस भएपछि घैटेको सम्पत्तिमा बस्नेतले दावी गर्दे आए । त्यतिबेला घैंटेले कमाएको अकूत सम्पत्तिसँग जोडिएर बस्नेत पनि चर्चा थिए । निर्माण व्यवशायसँग समेत जोडिएका घैटेको सबै विषयमा बस्नेत जानकार भएपछि इनकाउन्टरमा पर्ने डरले बस्नेत भूमिगत भए । बस्नेत चरीका दुश्मन राधे भण्डारीसँग दोस्ती थियो । बस्नेतसँग सानुभाई भन्ने युबराज गुरुड र चाबहिलका हबल्दार भन्ने प्रतिक श्रेष्ठले मिलेर काम गर्दै आएका थिए । बस्नेतले बाफल देखी धादिडसम्म ठेक्का पट्टामा गुण्डागर्दी गर्दै आएका छन् । बस्नेत समूहकै नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके रिगल ढकालले दुइ बर्ष अघि अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् ।
भूमिगत भएपछि भारत पसेका बस्नेत बुटवलबाट भारत पसेका मनोज पुनको सम्पर्कमा पुगेको प्रहरीको दावी छ । प्रहरीका अनुसार केही समयअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले उनलाई पुनसँगै गोवामा देखेको थियो । प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको गुन्डाहरूको ग्रेडिङमा उनी ‘ए’ ग्रेडमा छन् । उनलाई नेपाली कांगेसका केही युवा नेताहरुल संरक्षण गरेको प्रहरी दावी छ ।